I-E-Export - Qala i-E-Export nge-Propars Manje!
Thola isabelo sakho sezimakethe ezinkulu zase-Europe ezithengisa amayunithi ayizigidi ezingama-48 ngosuku.
I-Propar ingumhlinzeki wesevisi osemthethweni we-Amazon.
ETurkey kuphela futhi ehamba phambili emhlabeni E-UKUTHENGISWA Isixazululo
Chofoza, qhathanisa, BHEKA umehluko.
Thumela i-E nge-E-commerce Site
Ama-96% wezindawo ze-e-commerce ezivulwe eTurkey ziyavalwa ngonyaka wokuqala.
Lapho uqala ukuthekelisa nge-e-commerce amaphakheji anomthelela ophansi, uzoba wedwa kuzo zonke izinqubo.
Ukuthengiswa kwe-e-commerce minyaka yonke kwabathengisi bakwaPropars kukhula ngama-300%.
Thumela i-E ngePropars
Bonke labo abaqale ukuthumela i-e ngePropars bathengisele umhlaba ngonyaka wokuqala. Ama-64% alabo abathole insizakalo yezeluleko eyisisekelo yamahhala yakwaPropars baqale ukuthumela ngaphandle kwezinyoni ezinyangeni ezi-3 zokuqala.
Ukuthengiswa kwabasebenzisi abathengisela izimakethe ezi-3 noma ngaphezulu kukhuphuka ngo-156%.
Ngesistimu yokuhumusha ezenzakalelayo, ulwazi lomkhiqizo olubhala ngesi-Turkish luhunyushwa ngokuzenzakalelayo olimini lwezwe lapho uvula khona imakethe ukuze ithengiswe.
Uma ufuna, ungangeza ukuhumusha kwakho okukhethekile kwezwe ngalinye kumikhiqizo yakho kwaPropars.
Ungabona futhi ukhethe izigaba zalelo zwe ngesi-Turkish kunoma yiliphi izwe ofuna ukuthengisa imikhiqizo yakho endaweni yemakethe.
Ungabona "izihlungi zomkhiqizo" ngesi-Turkish, ezenza imikhiqizo yakho igqame ezimakethe, futhi uzifanise nezihlungi zakho zomkhiqizo bese uzivula ukuze zithengiswe. Isibonelo: OKULUHLAZA kusihlungi somkhiqizo kuzovela NJENGOKULUHLAZA endaweni yemakethe yase-UK.
E-Turkey, ikhasimende lakho laseBrithani libona isicathulo osithengisayo singusayizi 40 njengo-6,5 kanye nekhasimende lakho laseMelika njengo-9, ngakho-ke uzozuza ukwaneliseka okuphezulu kwamakhasimende ngokuthengisa umkhiqizo ofanele.
Ukukhethwa kwamabhizinisi ayi-1500 + yiPropars.
"Ungaxhuma isayithi lakho le-e-commerce noma uhlelo lwe-erp accounting ku-Propars futhi wengeze isici se-e-export. Kubaluleke kakhulu ukuphatha njengoba kufanele ukuthengisa"
Qala i-E-Export ngePropars ngezinyathelo ezintathu
Ipropars ikuvulela izitolo zayo mahhala kumapulatifomu ofuna ukuwathengisa.
Ikuvumela ukuthi uthole amanani akhethekile ehlisiwe ezinkampanini zemithwalo yezinkontileka futhi wenze ukuthunyelwa okulula.
Imikhiqizo oyilayisha kwaPropars ithengiswa emazweni owafunayo.
Nge-Propar, qala ukuthengisa ngokuchofoza okukodwa ezimakethe zomhlaba ezifana ne-Amazon, Ebay, Allegro, Wish kanye ne-Etsy!
Qoqa wonke ama-oda akho esikrinini esisodwa, i-invoyisi ngokuchofoza okukodwa! Ungakhipha ama-invoyisi e-e ngobuningi ukuze uthole ama-oda akho ezimakethe kanye nesayithi lakho le-e-commerce futhi uphrinte ifomu lempahla eyinqwaba.
Ukuthenga kusuka ezimakethe esikhundleni sezindawo ezizimele ze-e-commerce zamakhasimende
Izizathu eziyishumi eziphezulu zokuthi kungani
Amakhasimende EmaketheAmakhasimende E-Commerce Site
Inketho yokuthumela yamahhala
Inqubomgomo yentengo enengqondo
Ukuthenga okuwusizo nokulula
Indawo yokuqhathanisa amanani
Ibanga lomkhiqizo elibanzi
Ukuqonda kwakudala kwezohwebo manje sekushiye indawo yakho ku-e-commerce. Kodwa-ke, i-e-commerce ayikuvumeli kuphela ukuthi ufinyelele kuwo wonke amadolobha ezwe lakini. Ngesikhathi esifanayo, amazwe anikeza ithuba lokuwela amazwekazi. Nge-e-export, ungaletha imikhiqizo yakho kumakhasimende akho angaba khona noma yikuphi emhlabeni.
Izimakethe zomhlaba manje ziyisikhungo sokuthenga esikhulu futhi esibonakalayo lapho wonke amakhasimende emhlabeni wonke ehlangana khona. Ukuvula isitolo kulezi zinkundla kusho ukuba nebhizinisi elizovakashelwa wumhlaba wonke.
Nakuba ukuthekelisa nge-elekthronikhi sekudume kakhulu, ikakhulukazi ngomsebenzi wokushintshaniswa kwamanye amazwe eminyakeni yakamuva, amabhizinisi anokubhuka okuthile mayelana nalolu daba.
Okokuqala nje, ama-SME ethu, angenalo ulwazi olwanele, acabanga ukuthi ngeke akwazi ukubhekana nalokhu kuthengiselana. Amabhizinisi amakhulu, ngakolunye uhlangothi, anobunzima bokuthatha izinyathelo ezifanele.
Kodwa-ke, ukusekelwa kwesoftware, izinxephezelo zikahulumeni, izinsizakalo zokukhokha, izinsiza zezokuthutha zithuthukiswa kakhulu. Manje, noma isiphi isikali noma umkhiqizo webhizinisi, ukuthekelisa nge-imeyili kungaqala ngokushesha futhi kalula.
I-Propars inguzakwethu oyisixazululo wezinkundla zomhlaba wonke eTurkey. Nge-software yethu ethuthukisiwe kanye nethimba lethu elichwepheshile, siletha amabhizinisi ethu amaningi ekuthumeleni kwamanye amazwe nge-imeyili.
Nge-E-Export Ukuzuza Ngezilinganiso Zemali
I-lira yaseTurkey ilandele ishadi elishintshashintshayo eminyakeni yamuva nje futhi ngeshwa yehle kakhulu. Nokho, ikhona indlela yokuguqula lesi simo sibe yinzuzo.
Ukuthengisa imikhiqizo yakho ngamazinga okushintshanisa abizayo kuvumela imikhiqizo yakho ukuthi izuze inani nge-TL. Imikhiqizo oyikhiqizayo nge-TL eTurkey idayiselwa phesheya ngemali efana ne-USD, i-euro ne-sterling. Ngale ndlela, ukhulisa inzuzo yakho nge-e-export. Ngaphandle kwalokho; Lokhu kungenye yezinzuzo zokuthekelisa nge-e.
Ukuthunyelwa kwakho ngaphakathi kwendawo yokuthekelisa okuncane kukhululiwe entela yaseTurkey. Ngaphezu kwalokho; Uma ukhokhe noma iyiphi i-VAT ngenkathi uthenga lo mkhiqizo, izokuvumela ukuthi uphinde uthole le mali.
Ukuhlukanisa ukuhweba kwakho eziteshini eziningi ngezilinganiso zokushintshana kunikeza imodeli yemali engenayo ephephile yebhizinisi lakho. Futhi ikuvikela ekuguquguqukeni emakethe yasekhaya.
Ukuthengisa Emhlabeni Wonke
Ngokusetshenziswa kabanzi kwe-inthanethi, umhlaba usuphenduke imbulunga yonke futhi, ngomqondo othile, unciphile. Amabanga awasekude kangako. Ibhizinisi laseTurkey lingethula kalula umkhiqizo walo kumakhasimende alo angaba khona kwelinye izwekazi futhi lingawuletha ngokushesha uma i-oda lamukelwa.
Awudingi ukucabanga ukuthi bangaki abantu ongabathengisa umkhiqizo owukhiqizayo edolobheni noma ezweni lakini. Umbuzo obalulekile uthi; bangaki abantu emhlabeni ongabadayisela yona.
Kungani ungaweli imingcele lapho ungafinyelela umhlaba wonke?